Date My Pet » 5 Zavatra mba handresena ny fifandraisana Communication ireo sakana
Tsy azo ihodivirana ny fifandraisana mpivady tojo entina mankatoa teny an-dalana, na ry zareo vao mampiaraka na am-polo taona hankalaza miaraka. Ireo missteps dia sarotra ny manova ny toe-sy mitaky ezaka avy amin'ny roa mahatsiaro tena mpiara-miasa. Fahatsiarovana manaraka ireto soso-kevitra hanampy anao rehefa taty aoriana ireo tsy fifanarahana:
1. Tsy ny mangina fitsaboana: Vehivavy sy ny lehilahy samy meloka izany tetika, ary izany mampino mampidi-doza sy manimba. Fanakatonana no nanidy indrindra ny mpiara-miasa avy, ary izany no tsy mahasoa ny miresaka ny tena olana akaiky. Araka ny mafy tahaka ny mety ho toa, mampiasa ny teny mba hanehoana ny fihetseham-ponao, ary aza matahotra ny hahazo manokana. Tsarovy, ny olona tsara no handehanana hiasa aminao amin'ny fifandraisana olana, Tsy mampiasa ny fihetseham-po toy ny bala hamelezana anao.
2. Aza manao vinavina tsotsotra: Mitovy amin'ny fitsaboana mangina, vinavina tsotsotra dia ohatra iray hafa ny handao ny hevitry ny mpiara-miasa avy, ary izany tsotra izao ho tsy rariny na olona. Mety mihevitra fa ny fohy ny valin-midika fa very liana, fa mba manana be dia be fotsiny mitranga any am-piasana. Raha tsy mangataka sy miantehitra fa tsy amin'ny ny sainao, tsy hahazo ny fahamarinana, ary nametraka ny tenanao mihitsy aza ho tohan-kevitra lehibe kokoa amin'ny farany.
3. Fandokafana tsara fitondran-tena: Raha mahatsiaro ho toy ny mpiara-miasa no tsy maneho anao ho toy ny teo aloha tena tia, miezaka mitondra azy amin'ny fomba fiderana amin'ny alalan'ny soso-kevitra. "Tena tiako ny namihina,"Ary, "Malahelo aho vao maraina ny hafatra an-tsoratra,"Samy tsy mampatahotra ohatra ny mampahery ny zavatra irinao. Atỳ, ianao mba hampahafantarana ny hevitrao amin'ny teny accusatory rehetra.
4. Manana ny fihetseham-ponao: Ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy fihetseham-po, fa mirona hampiseho ireo fihetseham-po amin'ny fomba samy hafa tanteraka. Vehivavy Mety hitomany, ary ny olona dia mety fume. Samy manan-kery ny valin-pihetseham-po, ary samy isan 'ny olona izay mahatsapa azy ireo. Tsy hilaza ny mpiara-miasa, "Nataonao tsapanao adala,"Izany Fanahy izany no fanambarana accusatory, nanazava ny fihetseham-pony eny possessive fiteny, ary manome fanazavana.
Ohatra, "Tsapako adala rehefa nanao ny moana Blonde vazivazy" dia tsy miady hevitra noho ny, "Ianao mahatsiaro ho ahy foana tsisy saina." Ny fanambarana voalohany ny mpiara-miasa ihany koa ny manome fahafahana hanazava ny tenany sy mamela azy hahafantatra ny tena loharanom-ny olana.
5. Mijanona tsara: Izany dia toughie, Fantatro! Tena mora ny mahazo tezitra na milaza zavatra tsy midika. Ataovy izay fara herinao mba hijanona sy hiasa tsara amin'ny famahana ny olana anatin'ny fahasalamana. Antoka, zavatra handeha hitsoka ny indraindray. Izay no ara-dalàna anisan'ny olona roa mizara ny fiainany miaraka. Tsarovy fotsiny ny hijanona nahatsiaro ny antony ianao miaraka ao amin'ny toerana voalohany, ary ny mifantoka amin'ny fihazonana fa fatorana.